Qaybo jaban oo warshad bir ah kaarboon iyo alaab-qeybiyeyaal ah. Ouzhan
Birta kaarboonku waa bir bir-karboon ah oo leh kaarboon ka kooban 0.0218% ilaa 2.11%. Sidoo kale loo yaqaan birta kaarboon. Guud ahaan, waxa kale oo ku jira qaddar yar oo silikoon ah, manganis ah, baaruud ah, iyo fosfooras. Guud ahaan, markay ka sarreeyaan kaarboon-ka ay ku jirta birta kaarboonku, way sii adkaataa adkaanta oo way sarreysaa awoodda, laakiin waxay hoos u dhigtaa baaxadda. Kaarboon birta ah ee loo yaqaan 'CNC Carbon steel forging' ayaa si ballaaran loo isticmaalaa waxayna ku habboon tahay inta badan qaybaha farsamada.
Birta kaarboon-ka-samaynta-saxda ah ee kaarboon-ka-samaynta qaybaha mashiinka
Ouzhan wuxuu si xirfad leh u habeyn doonaa qaybaha mashiinka si waafaqsan sawiradaada iyo shuruudahaaga. Been abuurku waa hab farsameyn loo adeegsado makiinado been abuur ah si loogu cadaadiyo cadaadiska meelaha birta ah si loo soo saaro cilado caag ah si loo helo cafisyo leh astaamo farsamo oo gaar ah, qaabab iyo cabirro gaar ah. Been abuur (been abuur iyo shaambad) ayaa ka mid ah labada qaybood ee waaweyn. Wax soosaarka been abuurka ahi waa mid ka mid ah hababka wax soo saar ee ugu waawayn si loo helo qaybo farsamo oo ka banaan meelaha wax soo saarka mashiinada. Iyadoo la adeegsanayo been abuur, kaliya maahan qaabka qaybaha farsamada ayaa lagu heli karaa, laakiin sidoo kale qaab dhismeedka gudaha ee biraha waa la horumarin karaa, iyo farsamooyinka iyo astaamaha jireed ee birta waa la horumarin karaa. Guud ahaan, qeybaha ugu muhiimsan ee farsamooyinka leh culeyska sareeyo iyo baahiyaha sare waxaa lagu soo saaraa qaabab wax soo saar oo been abuur ah. Qaybaha muhiimka ah sida mashiinnada matoorrada marawaxadaha, rooorrada, qalabka wax lagu dhejiyo, garbaha, giraanyada waardiyaha, tiirarka saxaafadda ee haydarka ee waaweyn, dhululubada cadaadiska sare leh, duubista qalabka wax lagu duubo, qalabka mashiinka qiiqa gudaha, isku xidhka ulaha, qalabka, miisaska, iyo madaafiicda warshadaha difaaca. dhamaan wax soo saar been abuur ah.
Faa'iidooyinka kaarboonka qaybo been abuur ah
- Hubso sii wadida abaabulka biraha
- La hagaajiyay sifooyinka jirka ee biraha
- In la hagaajiyo astaamaha birta iyo farsamada ee biraha
OEM kartoo steel kaarboonka forging adeegga-Shiinaha Shanghai CNC carbon steel xardho qaybo soo saaraha
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, waxay ku shaqeyn kartaa birta kaarboon leh qaybo xaddidan oo CNC xaddidan oo la isku halleyn karo. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa.
Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka hawlgalku waxay xaqiijin karaan soosaarka qumman ee birta kaarboon ka sameysan ee farsameeya qaybaha farsamada. Intaa waxaa dheer, alaabada birta ah ee kaarboon-ka ah ee CNC ayaa si adag loo waafajiyay heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Oo waxaan ku siin karnaa adeegyo qiimo tartan u ah kaarboon birta ah ee loo yaqaan 'CNC steel steel alaabooyinka been abuurka ah ee macaamiishayada qiimaha leh.
Birta kaarboon Ouzhan been abuurtay qaybo ka baaraandegidda faa'iidooyinka
(1) Been abuurku wuxuu ku habboon yahay ka baaraandegidda dusha sare ee wareegga gudaha iyo dibaddaba. Kala duwanaanta saxda saxda ah ee wax soosaarka been abuurka waa zhiIT13 ～ IT6, iyo qallafsanaanta dusha sare ee Ra waa 12.5 ～ 1.6.
(3) Been abuurku wuxuu leeyahay la qabsi xoog leh qaabdhismeedka, sheyga, dufcadda wax soo saarka, iwm ee qalabka shaqada, waana la adeegsadaa. Marka lagu daro abuurista bir kala duwan, birta birta ah, iyo biraha aan birta ahayn, waxay sidoo kale been abuuri kartaa biraha aan ahayn biraha sida fiberglass, bakelite, nylon iyo wixii la mid ah. Qaar ka mid ah biraha aan birta ahayn ee aan ku habboonayn wax shiididda, qalabka leexinta dheemanka ayaa loo isticmaali karaa been abuur wanaagsan, kaas oo heli kara saxsanaanta mashiinnada sare iyo qiyamka cufnaanta dusha sare.
(4) Marka laga reebo cirifka dusha sare ee sinnaanta ee maran, inta badan cafiska waa goyn isdaba joog ah oo leh iskutallaab goyn siman. Sidaa darteed, xoogga goynta waxyar baa is beddela, hannaanka goynta ayaa xasilloon, taas oo ku habboon goynta xawaaraha sare iyo goynta xoogga leh, waxayna leedahay wax-soo-saar sare oo wax soo saar leh.
Faa'iidooyinka Adeegga Been Abuur ee Ouzhan Carbon
-Dhammaan waxyaabaha saxda ah ee alaabada birta ah ee kaarboonku sameeyeen waxay ku xiran yihiin baaritaanno tayo leh oo adag.
Hore: OEM Hot Extrusion qaybo been abuur ah
Xiga: Kaarboonka loo habeeyay qaybo been abuur ah